Dibadbax Rabshado wata laguna diidanyahay Hay’adda DP World oo ka socda Berbera | Baydhabo Online
Dibadbax Rabshado wata laguna diidanyahay Hay’adda DP World oo ka socda Berbera
Magaalada Berbera ayaa Saaka ku waabariisatay Dibadbax ka dhan ah Hay’adda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta,taas oo uu Maamulka Somaliland kula heshiiyay in ay dhisto Dekaddaasi.Dadka Magaalada Berbera ayaa Waddooyinka magaalada isugu soo baxay iyaga oo diiddan in Dekadda lagu wareejiyo Mas’uuliyiinta Hay’adda DPWorld ee Saaka gaaray magaaladaasi.
Dadka ayaa Waddooyinka waa weyn ee magaalada ku gunaya Taayirrada iyo Iyada oo Ciidanka Amaanka ay isku dayayaan in ay xaaladda dejiyaan.
Maamulka Somaliland ayaa heshiis aanay ku qancin Shacabka Mamaulka Somaliland la galay Sharikaddaasi,kaas oo ah in Dakhliga ka soo xarooda Dekadda uu 65% aado dhinaca Hay’adda dhiseysa Dekadda halka 35% ay qaadanayaan Maamulka Somaliland.
Siyaasiyiinta Mucaaridka iyo inta badan Dadka Maamulka Somalialnd ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay Dhaxal Wareejin,waxaana ay uga digeen Maamulka Siilaanyo in uusan ku deg degin bixinta Hantida Umadda.
Maamulka Somaliland ayaa ku doodaya in Dekadda oo la dhiso ay muhiimaddu tahay.waxaana la filayaa in maanta Munaasibadda Hay’addaasi lagula wareejinayo Dekaddaasi ay ka dhacdo Magaalada Berbera,halkaas oo ay wlai ka socdaan rabshado arrintaasi laga soo horjeedo.